Fanabeazana mampiaty : nahafa-po ny ezaka, mbola betsaka ny asa miandry | NewsMada
Fanabeazana mampiaty : nahafa-po ny ezaka, mbola betsaka ny asa miandry
Nanatanteraka atrikasa ametrahana ny drafitrasa iraisana momba ny fanabeazana mampiaty azo ampiharina ho an’ny taom-pianarana 2017-2018 ny sampandraharaha misahana ny fampianarana « préscolaire” (Depa), ny alarobia sy ny alakamisy teo.
Niady hevitra momba ity fanabeazana mampiaty ity ireo mpizaika 66 avy amin’ny minisitera telo sy ireo fikambanana tsy miankina ary ny fikambanana iraisam-pirenena.
Efa nanomboka ny volana jona 2015 ny fanentanana momba ny fanabeazana mampiaty. Maherin’ny 1,26 tapitrisa ireo ankizy marefo voakasik’izany raha ny taom-pianarana 2016-2017 teo. Nifanindran-dalana tamin’izany ny fampianarana sy famerenana an-dakilasy ireo ankizy 110.000.
“Nahafa-po ny vokatra raha ny tatitra nandritra ny atrikasa farany teo”, hoy ny talen’ny sampandraharaha misahana ny fampianarana “préscolaire” ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Mananjaona Ravelonjanahary Arthure.
Nahafahana nandinika ny drafitrasa apetraka ao anatin’ny dimy taona ho avy momba ny fanabeazana mampiaty ihany koa ny fihaonana.
Mbola betsaka ny ezaka miandry amin’ity sehatra ity indrindra ny tsy fahampian’ny fanabeazana ireo ray aman-dreny manana zanaka manana fahasembanana. Miteraka fitokana-monin’ireo ankizy izany. Eo koa ny mbola fisalasalan’ny sekoly sasany tsy handray akizy manana fahsembanan. Ny tsy fahampian’ny mpampianatra voaofana manokana hanabe ireny ankizy ireny. Ny tsy fahampian’ny fitaovana ampiasaina….